▄ မိုက်ရှုးရဲစိတ်ကလေး – Min Thayt
တခါတရံ ကြီးကျယ်သော တစ်ဆစ်ချိုးအပြောင်းအလဲများအတွက်၊ တွန့်ဆုတ်မှုများဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဦးစားပေးထားပါလျက်၊ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ်မှန်းသိပါလျက်၊ သို့လောသို့လောဖြင့် တွန့် ဆုတ်မှုများဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ သို့အတွက် မိုက်ရူးရဲစိတ်နှင့် တစ်ဇောက်ကန်းစိတ်ကလေးကို ခဏတာ နေရာ ပေးလိုက်စေချင်ပါသည်။ ခက်ခဲသောရွေးချယ်မှုများအကြား အကျပ်အတည်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်စရာ အကြောင်း တရားများသည် ရံဖန်ရံခါ မိုက်ရူးရဲစိတ်ကလေးက ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင် စွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဘဝမှာ လူတိုင်းလိုလို၊ ခက်ခဲသော ရွေးချယ်မှုများ ကြုံဆုံရလေ့ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ခက်ခဲသော ရွေးချယ်မှုများ သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါ။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတူနိုင်ပါ။ တစ်ဦးတည်းနှင့်သာ သက်ဆိုင် သော ရွေးချယ်မှုများရှိသလို၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်၍ အများသို့ သက်ရောက်နိုင်သော တစ်ကိုယ်တော်ရွေးချယ်မှု များလည်း ကြုံရပါသည်။ သက်ရောက်မှု ရှိပုံချင်း မတူ၍ အဖြေများလည်း ကွဲလွဲပါလိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်တော် လွတ်လပ်မှုရှိနေသည့်တိုင် အများနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေသော အကြောင်းတရားများတွင်၊ ခက်ခဲသော ရွေး ချယ်စရာများ ရှိနေတတ်သည်။ အထိုင်မတူ၍ ရွေးချယ်မှုများ တူညီနိုင်မည် မထင်ပါ။ ကိုယ့်ဘဝနှင့် ကိုယ်သာ သက်ရောက်နိုင်သော ကိစ္စရပ်များ၌၊ လွတ်လပ်စွာ ရွေးနိုင်သည့်တိုင် အများသို့သက်ရောက်နိုင်သောကိစ္စရပ် များတွင်၊ ဆန္ဒကို မြိုသိပ်ရသည်များ ရှိနေတတ်ပါသည်။
ခက်ခဲသော ရွေးချယ်မှုများ၌၊ ရံဖန်ရံခါ ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ချင့်ချိန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များက မှန်ကန်နေတတ် သည်။ သို့သော်လည်း တခါတရံ မိုက်ရူးရဲဆန်ဆန် တစ်ဇောက်ကန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုမှ မှန်ကန်နေတတ်သည်။ မတူပါ။ ထို့ကြောင့် ခက်ခဲသောရွေးချယ်မှုများတွင် သွေးကြောင်နေတတ်သည်။ သွေးနည်းနေတတ်သည်။ တချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် ဆင်ခြင်တုံတရားက အလုပ်မဖြစ်ပါ။ ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် အဆုံးစွန်ဆုံးထိ စဉ်းစား ပြီး၊ မိုက်ရူးရဲစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှ ကောင်းပါလိမ့်မည်။ ဤနှစ်ခုသည် မျှခြေသဘောဖြစ်ပါသည်။ အကဲဆတ်သော နိုင်ငံရေးကိစ္စများတွင်၊ အမြဲတစေ ဆင်ခြင်တုံတရား ဦးစီးဖို့ မလိုသလို၊ အမြဲတစေ တစ်ဇောက်ကန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမျိုးလည်း မလိုအပ်ပါ။ တခါတရံ စွန့်စား၍ ဇွတ်တိုးလုပ်ရသောကိစ္စရပ်များ အတွက် ခဏတာ မျက်စိမှိတ်ထားတတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ သည်နေရာတွင် ခဏတာ မျက်စိကန်းနေဖို့ မဆိုလို ချင်ပါ။ ပြင်းထန်သော သဘောရှိ၍ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုချင်သည်မှာ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ နေရာပေးခဲ့သည့်တိုင်၊ ရှေ့ဆက်တိုးရခက်နေလျှင် မိုက်ရူးရဲစိတ်ကို နေရာပေးဖို့ သင့်ပါလိမ့်မည်။ သည်လို ထိုးဖောက်၍ စွန့်စားရဲသောလူများကြောင့်သာ ကမ္ဘာကြီးသည် အပြောင်းအလဲဖြစ်လာရသည်ကို၊ သတိချပ်သင့်သည်။ သမိုင်းကို ပြန်လေ့လာသင့်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရပ်များ ဒုနှင့်ဒေး ရှိပြီးဖြစ်သည်။
သေချာနေသည်ကို လုပ်တာက အခြေအနေတိုင်းတွင် မဖြစ်နိုင်။ မသေချာသည့်နယ်ကို တိုးဝင်၍ စွန့်စားမှ ကောင်းပါလိမ့်မည်။ အမြဲတမ်း သေချာမှ လုပ်မည်ဆိုလျှင်၊ အပြောင်းအလဲတွင် ဦးဆောင်လို့ မရ။ အပြောင်း အလဲနှင့် ကြီးမားသော တစ်ဆစ်ချိုး အချိုးအကွေ့များ၌ မျက်စိမှိတ်၍ သွေးတိုးစမ်းလုပ်လိုက်ရသော အကြောင်း ရပ်များ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်သည် နိုင်ငံရေး၌ များသောအားဖြင့် မှန်နေတတ်သည်။ အကယ်ဒမစ်သမား များကို နိုင်ငံရေးအာဏာ အပ်လျှင်၊ အမြဲတစေ ကြီးကျယ်သော အပြောင်းအလဲများ မဖြစ်။ တချို့သော အပြောင်းအလဲများသည်၊ ဆင်ခြင်မှုထက် မိုက်ရူးရဲစိတ်က ပို၍ အရာရောက်သည်။ သို့လောသို့လောဖြင့်၊ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်လုပ်နေလျှင် အလုပ်မဖြစ်။ အပြောင်းအလဲသည် မသေချာ၊ မရေရာတတ်။ သေချာရေရာမှ ပြောင်းမည်ဆိုလျှင်လည်း ကြီးကျယ်သော ပြောင်းလဲမှုများက အစဉ်မလာနိုင်။ ထို့ကြောင့် အကဲဆတ်၍ စွန့်စား ရသော အပြောင်းအလဲများတွင်၊ တစ်ဇောက်ကန်းစိတ်တစ်ခု ခဏတာ မွေး၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ဖို့ သင့် သည်။
မျက်ကန်းတစ္ဆေ မကြောက်ဆိုသည့် စကားသည် အမြဲတမ်း မမှား။ သို့သော် အမြဲတမ်းလည်း မမှန်။ မှန်သင့်သ လောက်တော့ မှန်သည်။ တချို့နေရာများတွင် တစ်ဆစ်ချိုး အပြောင်းအလဲများအတွက် ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဦးစားပေး မထားသင့်။ လုပ်လိုက်ရမှ ဖြစ်မယ့်အလုပ်များ၌ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေလျှင်၊ မိုက်ရူးရဲစိတ်ဖြင့် မျက်စိမှိတ်ဝင်တိုးလိုက်သင့်သည်။ ဤသို့ဖြင့် မသေချာ မရေရာ၍ အလွန်အမင်း စွန့်စားရသည်ဟူသော အလုပ် မျိုးကို အောင်မြင်အောင် လုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကျနော့်အမြင်၊ ယူဆချက်အရ… ဘဝတွင် ကြုံခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များ၊ သို့တည်းမဟုတ် ခက်ခဲသော ရွေး ချယ်မှုများနှင့် မသေချာ မရေရာသော ဖြစ်ရပ်များ၌ လုပ်ကိုလုပ်ရမည်ဟု သိနေပါလျက်၊ တွန့်ဆုတ်နေလျှင် ကျနော်သည် ဆင်ခြင်တုံတရားကို နေရာ မပေးတော့ပါ။ မိုက်ရူးရဲစိတ်၊ တစ်ဇောက်ကန်းစိတ်ဖြင့် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် စမ်းကွာ…. သန်းခေါင်ထက် ပိုဉာဉ့်မနက်ဘူး…. ဟု နှလုံးသွင်း၍၊ ဇွတ်တိုး လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဤသို့လုပ်လိုက်တိုင်း ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ တချို့သော တကယ့်ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲများ လိုချင်လျှင်၊ အမြဲတမ်း ချင့်ချိန်တွက်ချက်နေလို့ မရ။ မသေချာသော်လည်း ဇွတ်တိုးလုပ်လိုက်လျှင်၊ နောက်ဆုံး ဒီတောင်ကို ကျော်နိုင်သွားခဲ့သည်သာဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဘဝတွင် တခါတရံ ခက်ခဲသောရွေးချယ်စရာများ ကြုံလာလျှင်၊ ချင့်ချိန်တွက်ချက် ဆင်ခြင်နေမှုများ ဖြင့် တွန့်ဆုတ် တွန့်ဆုတ် မဖြစ်စေဘဲ၊ မိုက်ရူးရဲစိတ်၊ တစ်ဇောက်ကန်းစိတ်ကို နေရာပေး အသုံးချနိုင်မှ အဆင်ပြေနိုင်မည်၊ ကြီးကျယ်သော အပြောင်းအလဲများကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
ဘဝတွင် ရခဲ့သော နောင်တများကို ပြန်ကြည့်လျှင်၊ လုပ်လိုက်ရ၍ မှားသွားသောကိစ္စရပ်များကြောင့် ရသော နောင်တမျိုးထက် သို့လောသို့လောဖြင့် မလုပ်လိုက်ရဘဲ ရလိုက်သော နောင်တများက ပို၍ များပြားကြောင်း တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ညနေ ၆း၄၀
၁၇ ၊ ဇူလိုင် ၊ ၂၀၂၀။
Previous post ▄ နိုင်ငံရေးလေ့လာမှု အစ
Next post ▄ ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါ့မလား